aishworya – best nepali site
DRAKE – KEKE DO YOU LOVE ME DRAKE – KEKE DO YOU LOVE ME DRAKE – KEKE DO YOU LOVE ME DRAKE – KIKI DO YOU LOVE ME DRAKE – KIKI DO YOU LOVE ME DRAKE IN MY FEELINGS DRAKE IN MY FEELINGS DRAKE IN MY FEELINGS
Here’s3hours of fun songs and music videos from Badanamu that would surely bringalot of colors to your day. Take your child’s first learning steps with Badanamu!
९ साउन, काठमाडौं । इटालियन क्लब रोमाले सहमति भएको घोषणा गरेको भोलिपल्टै ब्राजिलियन विंगर माल्कोम बार्सिलोना आएका छन् । २१ वर्षीय माल्कोमले स्पेनिस च्याम्पियनसँग ५ वर्षे सम्झौता गरेका छन् । सोमबार मात्र रोमाले माल्कोमलाई ल्याउन बोर्डो क्लबसँग सहमति भएको र छिट्टै मेडिकल हुने बताएको थियो । रोमाका अनुसार कुनै सम्झौता त भएको थिएन तर,
९ साउन, काठमाडौं । बुधबार फेरी सेयर बजारमा करिब ५ अंकले गिरावट देखिएको छ । १ हजार १ सय ९९ दशमलव ३० अंकबाट शुरु भएको कारोबार ४ दशमलव ९२ अंकले घटेर नेप्से परिसुचक १ हजार १ सय ९४ दशमलव ३५ अंकमा कायम भएको छ । मंगलबार भने सेयर बजार ४ दशमलव ७७ अंकले घट्दा नेप्से
नायक सलिनमान बनियाँका फ्यानले असोज ५ गते उनी अभिनित चलचित्र ‘यात्रा’ हेर्न पाउने छैनन् । वैशाखमा कार्यक्रम गर्दै यसका निर्माता केशव भट्टराइले असोज ५ गते चलचित्र चल्ने बताएका थिए । तर, यो मितिमा चलचित्र नआउने फाइनल छ । निर्माताले किन यति हतारमा चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरे, त्यो उनले नै जान्ने कुरा भयो । तर,
असोज ५ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’को ‘उडायो हावाले’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रतिक्षित यो चलचित्रलाई रेनशा वान्तवा राइले निर्देशन गरेकी हुन् । लण्डनमा र नेपालमा खिचिएको चलचित्रको शिर्ष गीतमा मुख्य कलाकार साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र नव–नायक धिरज मगरलाई फिचरिङ गरिएको छ । यो गीतमा हर्कुलेस बस्नेत र निकिता